Babongwe ngokwelulelwa ikhefu abeSundowns | News24
Babongwe ngokwelulelwa ikhefu abeSundowns
Cape Town – Kubukeka sengathi iMamelodi Sundowns isibonge abadlali bayo ngomsebenzi abawenzile bewina isicoco seCAF Champions League ngokuthi ibanikeze ikhefu elengeziwe kuze kube umhla zingu-18 kuJanuwari.
Ngaphambi kwalo mqhudelwano amaBrazilians abesedlale isikhathi eside emidlalweni yemiqhudelwano eyehlukene ngenxa yomkhankaso wabo e-Afrika kanye nokubamba iqhaza emidlalweni yeFIFA Club World Cup ebiseJapan ngoDisemba, ngonyaka owedlule.
OLUNYE UDABA: IZITHOMBE: ISundowns ikhethwe njengeqembu lonyaka yiCAF
Kubukeka sengathi iSundowns izoba ngelinye lamaqembu azobuyela kamuva ekuziqeqesheni ukulungiselela ingxenye yesibili yesizini. Amanye amaqembu asevele aseqalile ukuziqeqesha njengoba kubikwa nokuthi iKaizer Chiefs ibuyele ensimini ngomhlaka-6 kuJanuwari.
Oyi Communications Co-ordinator kuSundowns, uThulani Thuswa, ukuqinisekisile kuSoccer Laduma ukuthi leli qembu lizoze liqale ukuziqeqesha maphakathi noJanuwari, nalapho bezobe bezilungiselela ukuvikela isicoco sePSL kanye neCAF Champions League.
Ngaphezu kwalokho, leli qembu eliqeqeshwa nguPitso Mosimane lisasalelwe umthwalo njengoba lona lisalele emuva ngemidlalo engu-6 kuneningi lamanye amaqembu.